Cecilie Bahnsen သည် ၎င်းတို့၏ ပထမဆုံးအိတ်များကို စုစည်းတင်ပြခဲ့သည်။
Красота / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
ဒိန်းမတ် အမျိုးသမီး ၀တ်စုံအမှတ်တံဆိပ် Cecilie Bahnsen သည် ဂျပန်ကုမ္ပဏီ Chacoli နှင့် ပူးပေါင်းဖန်တီးထားသည့် ၎င်း၏ ပထမဆုံး capsule collection အိတ်များကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ စုစည်းမှုအား ဗြိတိန် အပြင်ဘက် ကုမ္ပဏီ Mackintosh ၏ အကြွင်းအကျန် အထည်များမှ ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အိတ်များ၏ ဒီဇိုင်းသည် အံဝင်ခွင်ကျနေ့စဉ်ဝတ်ရန်အတွက် ပုံစံနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အမှတ်တံဆိပ်များသည် အနက်၊ အဖြူ၊ မီးခိုးရောင်၊ အပြာရောင်နှင့် တက်ကြွသော အရိပ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော လက်ကိုင်အိတ်များကို တီထွင်လာကြသည်။
Cecilie Bahnsen သည် ၎င်းတို့၏ ပထမဆုံးအိတ်များကို စုစည်းတင်ပြခဲ့သည်။ လုံးဝဖတ်ပါ "
Fendi သည် Baguette စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုပရောဂျက်ကို စတင်ခဲ့သည်။
Fendi သည် ခရစ္စမတ်ရာသီကို ဂုဏ်ပြုရန် Baguette ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ပရောဂျက်၏ အဓိက စိတ်ကူးမှာ အိတ်ထဲသို့ ထူးခြားသော ပစ္စည်းများကို အမြန်ထည့်ရန် ဖြစ်သည်။ သံလိုက်အခြေခံကြောင့် ချိတ်ကို လျင်မြန်စွာ အစားထိုးနိုင်သည်။ ရွေးချယ်မှုများ၏ရွေးချယ်မှုသည်လုံလောက်သည် - အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများ၊ အရောင်များ၊ ကျောက်တုံးများကိုတုပသည်။ Baguette ကို ဗားရှင်းသုံးမျိုးဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပထမတစ်မျိုးက ပုတီးလေးတွေနဲ့ ချည်ထိုးထားပြီး ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ ကြွားဝါပါတယ်..။
Fendi သည် Baguette စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုပရောဂျက်ကို စတင်ခဲ့သည်။ လုံးဝဖတ်ပါ "
Home Alone မှ အိမ်သို့ Airbnb တွင် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။
Macaulay Culkin အဖြစ် Kevin McCallister အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားသော Home Alone ဇာတ်ကားမှ နေအိမ်သည် Airbnb တွင် တစ်ညတာ ကြိုတင်မှာယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Disney + Home Sweet Home Alone ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက် သတင်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ချီကာဂိုရှိအိမ်အား Kevin ၏အစ်ကို Buzz McCallister မှငှားရမ်းထားကြောင်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ “ကျွန်မက အထူးကြင်နာတတ်တာကို မမှတ်မိတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်…
Home Alone မှ အိမ်သို့ Airbnb တွင် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။ လုံးဝဖတ်ပါ "
Beyoncé ၏သမီးများသည် Ivy Park နှင့် Adidas အတွက်ကြော်ငြာကမ်ပိန်းအသစ်တွင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Ivy Park နှင့် Adidas တို့သည် Halls of Ivy နှင့် ၎င်းတို့၏ ပဉ္စမမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဗီဒီယိုကို ပြသခဲ့သည်။ ဘီယွန်းစေး၏ သမီးများဖြစ်သည့် Blue Ivy နှင့် Rumi Carter တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ၎င်းတို့အပြင် Kobe Bryant Natalia Bryant ၏အကြီးဆုံးသမီး၊ Reese Witherspoon Ava Elizabeth နှင့် Deacon Reese တို့၏သားသမီးများအပြင် ဘတ်စကက်ဘောကစားသမား James Harden နှင့် Jalen Green တို့လည်း ဗီဒီယိုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ "အိုင်ဗီဟောလ်က...
Beyoncé ၏သမီးများသည် Ivy Park နှင့် Adidas အတွက်ကြော်ငြာကမ်ပိန်းအသစ်တွင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ လုံးဝဖတ်ပါ "
Jacquemus သည် ပန်းရောင် အရိပ်များဖြင့် ပွဲလမ်းသဘင် စုစည်းမှု ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Jacquemus သည် Pink2၏ ပွဲလမ်းသဘင် collection အသစ်ကို တင်ဆက်ထားပါသည်။ ၎င်းတွင် ပန်းရောင်အရိပ်များပါ၀င်သည်- အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် ကလေးများအတွက် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ အဝတ်အစား၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများနှင့် အသုံးအဆောင်များ။ အမှတ်တံဆိပ်သည် ဆေးတောင့်အသစ်၏ပုံများကို ၎င်း၏ Instagram တွင် မျှဝေခဲ့သည်။ Simon Port Jacquemus သည် ကာဒီဂန်များ၊ ဘောင်းဘီရှည်များ၊ လက်ရှည်များ၊ အင်္ကျီများ၊ ဘောင်းဘီ ဝတ်စုံများ၊ အကျီများ၊ ဦးထုပ်များ၊ ပဝါများနှင့် ပိုးအိပ်ဝတ်များကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ထို့အပြင် စုစည်းမှုတွင်...
Jacquemus သည် ပန်းရောင် အရိပ်များဖြင့် ပွဲလမ်းသဘင် စုစည်းမှု ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လုံးဝဖတ်ပါ "
IV Forum of Food Industry Leaders ကို မော်စကိုတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
စားသောက်ဆိုင် Concepts အတွက် Palm Branch Award ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ကျင်းပသည့် Food Industry Leaders IV ဖိုရမ်ကို မော်စကိုမြို့ရှိ Mir ခန်းမတွင် ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပွဲကို ထူးခြားဆန်းသစ်သော Leaders Talk ပုံစံဖြင့် ကျင်းပသည် - စားသောက်ဆိုင်စျေးကွက်၏ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်း စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း၏ အကြောင်းအရာဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊ မူရင်းဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ စိတ်ကူးများနှင့် ထိရောက်သော စီးပွားရေးဖြေရှင်းနည်းများကို တိုတိုနှင့် ရိုးရိုးသားသား တစ်ဦးချင်း မိန့်ခွန်းများအတွင်းတွင် ၎င်းတို့၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို မျှဝေပါသည်။ ဒီနှစ်ဖိုရမ်...
IV Forum of Food Industry Leaders ကို မော်စကိုတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ လုံးဝဖတ်ပါ "
အမေရိကန်နိုင်ငံသားများထံမှ သင်ယူရမည့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ
interesnenkoe / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
ဟုတ်ပါတယ်၊ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုစီဟာ ထူးခြားပြီး ပြင်ပက ထပ်လောင်းမှုတွေနဲ့ လွှမ်းမိုးမှုတွေ မလိုအပ်ပါဘူး။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အခြားသူများကို အောင်မြင်ပြီး ပိုပျော်ရွှင်စေရန် ကူညီပေးသည့် အဆိုပါအရည်အသွေးများကို မည်သူမျှ စူးစမ်းခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက် ဆည်းပူးရကျိုးနပ်မည့် အမေရိကန်လူမျိုးများ၏ အဓိကအရည်အသွေးများကို ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသည်။ သက်တောင့်သက်သာက အရေးကြီးဆုံး မြို့ကြီးပြကြီးတွေရဲ့ ခေတ်သစ်ဘဝရဲ့ စည်းချက်က...
အမေရိကန်နိုင်ငံသားများထံမှ သင်ယူရမည့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ လုံးဝဖတ်ပါ "
12... 493 နောက်တစ်နေ့ →
မူပိုင်ခွင့်© 2021 MamaClub | တို့က Powered WordPress ကိုအဓိက Astra